Halyey Barcelona ah oo kula taliyay Gareth Bale inuu ka tago kooxda Real Madrid – Gool FM
(Spain) 22 Maajo 2020. Halyey kooxda Barcelona ah ayaa kula taliyay xiddiga garabka uga ciyaara Real Madrid ee Gareth Bale inuu ka tago garoonka Santiago Bernabéu xagaaga soo aadan.
Gareth Bale ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda Real Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo bixitaankiisa lala xiriirinayo inuusan ku qanacsaneyn macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Haddaba halyey kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay Gareth Bale, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan arkaa in Gareth Bale uu wali wax badan ku soo kordhin karo kubadda cagta Yurub, kahor inta uusan u dhaqaaqin horyaalo kale”.
“Premier League waxaa laga yaabaa inuu u noqdo halka ugu wanaagsan uu ku biiri karo Bale”.
“Haddii Newcastle United ay si dhab ah u xiiseyneyso dib u soo nooleyntiisa, isla markaana uu jiro dalab dhab ah, markaas waxaan dhihi karaa waa fursad u fiican isaga”. Ayuu yiri halyeyga reer Brazil ee Rivaldo.
“Eden Hazard wuxuu ku guuleysan karaa abaal-marinta Ballon d'Or”